Kungani ingane ikhupha ephusheni?
Ukushaywa isici esisodwa somzimba womuntu. Ezimweni ezifanayo, ezinye izingane zithuthuka kakhulu, kanti ezinye - ngaphansi.
Isizathu sokujuluka singenza izingubo zokwakha, lapho umntwana elele khona. Ama-Pajama kufanele akhiwe ngezinto zokwakha zemvelo. Uma ingane ilele egumbini elipholile, i-nightclothes yejezi eqinile noma i-flannel elithambile iyokwenza.
Ngokuvamile isizathu esiyinhloko esenza ingane ivuke ephusheni ukushisa okuphezulu ekamelweni lapho umntwana elele khona. Ngakho-ke, abazali kufanele bavame ukuvuthisa ekamelweni lezingane, behlise izinga lokushisa libe yi-22 ° C bese banda umswakama emoyeni ube ngu-50-70%.
Ingane ingazikhukhumeza ephusheni, uma kusihlwa idlala imidlalo esebenzayo. Amaphupho amabi nawo athokoza isimiso sezinzwa zemvuthu. Ukwenza ukwakheka kwenani elikhulu lokujuluka kungahle kube yindawo yokufa.
Isizathu sokuthuthumela somntwana olele singabuye sibe isici ngasinye sokuthuthukiswa kwesimiso sezinzwa ezizimele. Ukubunjwa kwalo okuphelele kwenzeka kuphela eminyakeni emihlanu. Khona-ke ingane iyayeka ukuthuthumela.
Uma izimo ezihle zokulala zidalwa, futhi ingane yakho isaphikelela kakhulu, khona-ke kufanele uthathe imithwalo yemibonakalo yezinto eziphilayo zemvuthu ngokuziphendulela. Ngezansi sizocabangela ezinye izizathu ezibalulekile ukuthi kungani ingane ikhukhuma kakhulu ngesikhathi sokulala. Sithemba ukuthi lokhu kuzosiza abazali ukuvimbela ukuqala kwezinkinga ngempilo yengane.
Izizathu zokuthi ingane ikhuphuka kakhulu ngesikhathi sokulala
Izifo ezingenhla ekuphefumuleni. Ekuqaleni kwesifo, ukujuluka kungahambisana nokukhwehlela okungavamile.
Ukutheleleka ngegciwane. Esigabeni sokukhushulwa, lesi sifo sivela ngaphandle kwempawu. Kodwa ukujuluka ngokweqile kuzosiza ukuqonda ukuthi ingane igula. Ngaphezu kwalokho, ingane ingazikhukhumeza kakhulu ephusheni nasemva kokugula kwegciwane, ngoba ukuzivikela kwakhe kusenamandla.
Izifo ze-cardiovascular system - esinye isizathu esenza ingane ivuke kakhulu ephusheni. Ingane nayo ibhekene nokuphefumula, isizungu, ukuvuvukala kwezandla nezinyawo, inesikhumba esikhuphukile.
Ukungasebenzi komzimba we-thyroid. Umntwana akagcini nje ngokuthuthumela kakhulu ephusheni - unezinye izimpawu: ukwesaba okukhulu, ukwehla kwesisindo, ukuthuthumela kwamalungu, ukukhathala.
I-diathesis ye-lymphatic (isifo sofuzo). Ingane ibuye ikhulise i-lymph nodes, iyanciphisa ithoni ye-muscle, isikhumba esikhuphukile.
Kumele kugcizelelwe ukuthi ngenxa yezinkinga zezempilo, ingane ingathuthuki ngesikhathi sokulala ebusuku kuphela, kodwa futhi nokulala kwesikhashana.
Ukuphefumula okuningi ephusheni kungavela ngenxa yezifo ezenzeka okokuqala ngendlela evulekile. Kubazali lokhu kufanele kube yisibonakaliso sokuthi kuyadingeka ukuhlola ingane ngokushesha futhi uqale ukwelashwa.
I-Hydrocephalic syndrome ezinganeni
Isikhathi eside asidluli ukukhwehlela kwengane
Yeka ukuthi angamtheleleki ingane ebanda?
Isihlalo esinzima kwengane
Umntwana ukhahlela, kodwa umlenze awulimazi
Umlando wokuthuthukiswa kwengane - ifomu 112 / U
Zisusa kanjani i-adenoids ezinganeni?
Stomatitis ye-Herpetic ezinganeni
I-Tetracycline i-ointment yezinsana zezingane
Ingane inehlo lomanzi
Ukuqokwa kwengane - indlela yokusiza ingane?
I-inhalation ne-berodual nezingane
Inhalation nge-laryngitis ezinganeni
Ama-workstops ekhishi avela ku-chipboard
I-supermodel yaseBrazil u-Alessandra Ambrosio ihlobisa ikhava ka-Ephreli ELLE
Unganikeza ingane isifuba?
Ukulinganiselwa kwamalungelo omzali
Ufanani nombala we-orange?
Ungayithola kanjani i-vKontakte?
Ungamisa kanjani amakhowe?
Indlela yokufunda ukucabanga?
I-Periodontitis - izimpawu
Yini ukupheka kusuka ingulube for dinner?
Camellia - ukunakekela ekhaya
Izicathulo zezingane zokugwedla
Amasongo omntwana ama-napkins
Izikhwama ezinezinhlobonhlobo eziphambili zonyaka we-2014
Ukuphrinta amaflethi ezembatho 2014
Yini okufanele uyenze endizeni?
Ukudla Kim Protasov - incazelo eningiliziwe